Ngokuqhelekileyo kuninzi, uya kufumana abalobi, abathengisi beentlalo, kunye ne-digital gurus, bachithe iiyure bazama ukency i-tweet e mfutshane, enomthi, kwaye ngokuthe ngqo ukuya kwinqanaba kwaye banesithubaanulieehumamnyahuman.
1.16 Comedie centrală
1.21 Secretul kukaVictoria
I-Twitter bio ingaba yithuba elikhulu lokunika i-reia emfutshane okanye iziqulatho zakho zomsebenzi kunye nuMike Davidson, owayengumntu we-VP we-Design kwi-Twitter, uyazi indlela yokwandisa indawo encinane.
UBrown uyaziqhenya ngokuzibiza ecaleni lakhe elincinci ngokuzibiza ngokuba yi "Total geek de computer", kwaye "Utshatile kwikhompyuter" ngelixa ephakamisa "iikhompyutheni ezimbini zekhomputha zekamva".
Ewe, wayenako ukufaka umsebenzi wakhe wosuku njengomNxibelelanisi woNxibelelwano we-Women Film Fest, kunye ne-Twitter yokuphatha.
Ngoxa i-tweets zakhe kunye ne-bio zingadakalisa, i-akhawunti yakhe ye-Twitter ayikho în edityanisayo eyenza abalandeli baka-100.000.
Sindromul Ngaba wayesazi ukuba i-llamas inokuthi ihlupheke sindromul Kwi-Berserk llama, imeko apho i-llama ikholelwa ukuba umnini womntu nayo i-llama, ebangela ukuba babe nobudlova?
I-Twitter yeTime Siedell yiyo yonke into esinethemba lokuba sikwazi ukuyenza, okukuphela nje ukuyeka yonke in kwaye siphile ubomi bethu njengobungqina obuhle (okanye obuhle). Ngelishwa, ininzi yethu ayikho ibhiliyoni kunye / okanye ihle.
Asiqinisekanga ukuba u-Siedell unokwenjenjalo ukency zombini, kodwa siqinisekile ukuba uyazi ukuba unomdla kakhulu.
Ukubhala i-Twitter bio inokuba yintlungu (intlungu yokuqala yehlabathi ukuba uya kuthanda), kwaye kunokuba ubhaqe iintloko zabo bezama ukubhala indlela yokubhala ngokwenene, i-bio ngokwenene, bahamba ngenyaniso baze bavoni ukuba ‘Cinga.
Yiyekele kwiMicrosoft Central, inethiwekhi emalunga nokuhlekisa, ukency ibango lesibindi sokuzisa u-Comedy kwi-Twitter. Imfutshane, ilula, kwaye iya ngqo kwinqanaba. Ukugcina uhambelana nophawu lwabo lo gama usahlekisa.
UJohnny Cupcakes ngumntu oqhelekileyo we Marcă bazată pe Boston și nu o brutărie de cupcake, naphezu kwegama. Cupcake Ngamagama afana noJohnny, unokulindela ukuba i-akhawunti yabo ye-Twitter igcwaliswe tweet-uri neplăcute ezibhekiselele kwisambatho nesitayela.
I-Twitter yabo bio ngumzekelo ogqithisileyo wesimbolo somtsalane we-humour humor, esabanika ilandelayo enkulu kwaye ikhuthele.
Akunjalo ukuba oko kuyinyani okanye akunjalo, în enye inokuqinisekileyo, i-tweets zakhe zinyani kwaye ziyamangalisa ngokwenene.
UTom Hanks ngokuqinisekileyo ungumdlali noi "fiecare om". Esikhundleni sokuzibhalela i-Twitter bio ekhazimulayo, uHanks unyaniseka ngokuqinisekileyo ukuba ngamanye amaxesha unesimo esihle kwaye ngamanye amaxesha akayena.
Abantu badla ngokubhala ngeengcamango zabo ngolu hlobo lwecandelo, ‘în enokuba yinto edidayo. Wayeka yonke to ngokufaka intlanzi efanelekileyo kwi-bio yayo: "Akunjalo, ulungile?". Okuqinisekileyo kuya kuvala abagxekayo!
Eyaziwayo ngeentengiso zabo ezingenakudandaniswa kunye nomdlali we-Terry Crews, i-Old Spice ye-Twitter bio bio inayo yonke imveliso ye-akhawunti yeendaba yentlalo eyazi ukuhleka xa ihlala iyinyaniso kwi-brand yabo.
I-bio ayifanele ibe yinkcazelo ebanzi kakhulu. Ngamanye amaxesha, yonke into oyifunayo yimiyalezo engundoqo yokunika abantu ingcamango yento oyiyo yonke in kunye ne-Old Spice, konke "NGEMISEBENZI, AMAKHAYA, AMAKHASI, AMAKHONO, IZIFUNDO".
Ngokunikezela abasebenzisi i-workshop yamahhala, uGriffin wakwazi ukuxelela abantu ngomsebenzi wakhe njengomthengisi wedijithali ngeli xesha kunye nokubandakanya ikhonkco kwiklasi yakhe ye-intanethi. Ngoku ke ukuthengiswa okulungileyo calapho!
ULatka uyazifaka ngokubaluleka kwimicimbi ebalulekileyo yomsebenzi wakhe (i-CEO yeTheTopInbox.com kunye ne-podcast kunye ne-4,5 milioane de descărcări) kunye nezixhumanisi zomsebenzi wakhe ukuze abaphulaphuli banokufikelela ngokukhawuleza.
Ewe u-Aaron, semnavuma ukuba unayo inwele eyoyikisayo yokuzisa!
Umlobi weendaba kunye noBufffeed corespondent uwonke uMax Seddon uyazi ukuba ihlazo liyingxenye ebalulekileyo ye-Twitter bio. Ukuhlonipha kukaSeddon ukudibanisa uYakov Smirnoff wenza umsebenzi omkhulu wokongezelela umsebenzi wakhe njengomnyathelisi waseRusia, ngelixa echaza ingozi ezayo nayo.
ukuba "uyihlo, umbhali, aicihethi", u-Falls ubhala yakhe njengokuba kungabikho nxu lumano lokuba nguyena umntu ngaphandle kwakhe. Yilo hlobo lwesimo sengqondo esiphantsi komhlaba esenza i-Twitter bio ekhethekileyo.